माअाेवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा आक्रामक चुनावी प्रचारमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
एघार सय ११ प्रचार समिति गठन
ललितपुर, कात्तिक २१ । चुनावको मिति नजिकिए सँगै ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा पम्फा भुसालले चुनावी अभियान तीव्र पारेकी छिन ।
बाम गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार भुसालले सोमबार चुनाव प्रचारकै लागि एमाले, माओवादी र अन्य बाम गठबन्धन समेटेर एघार सय ११ सदस्यीय क्षेत्रीय निर्वाचन प्रचारप्रसार गठन गरेकी हुन् । संयुक्त निर्वाचन परिचालन समिति ललितपुरले मंगलबारबाट घरदैलो कार्यक्रम सुरु गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचार समितिमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य, क्षेत्रीय समिति, नगर वडाका पदाधिकारी तथा जबस मोर्चाका जिल्ला सदस्य क्षेत्रीय समिति, नगर÷गाउँ समिति, वडाका पदाधिकारी रहनेछन् । सो भेलाले चुनाव प्रसार प्रसार समितिको संयोजक एमालेको र सहसंयोजक माओवादी केन्द्रको रहने गरी निर्णय गरेको एमालेका प्रदेश सभाका उम्मेदवार जीवन खड्काले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालद्वारा ललितपुर ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता
एकदिन विराएर वडा नं. १, २, ३, ४, १० १८, २०, २१ २२, २५ गरी १० वटा वडामा घरदैलो कार्यक्रम संचालन हुने माओवादी केन्द्रका नेता हरि दाहालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन उम्मेदवार तथा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सबै जनताको समस्या हल गर्नको लागि आफू लागि पर्ने बताइन । विशेषगरी चुनाव प्रचारमा सबै घरका जनताको जाने र जनताको समस्यालाई लिपिवद्ध गरेर समाधान गर्न पहल गर्ने बताइन ।
याे पनि पढ्नुस माओवादीले आजै मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन सक्छ : प्रवक्ता भुषाल
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भुसाल २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट विजयी भएकी थिइन ।